K-pop ကြယ်ပွင့် Jaejoong တစ်ယောက် COVID – 19 ရောဂါခံစားနေရပြီလား ? ? ? – SoShwe
စကားတစ်လုံးမှ မပြောဘဲ အကျော်ကြားဆုံးသော TikTok ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ Khabane Lame
၅၂၀ မိုင်အထိ တောက်လျှောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု။
အမှားလုပ်မိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ထုတ်ခြင်းမလုပ်ဖို့ အကြံပြုလာတဲ့ Twilio ကုမ္ပဏီ CEO
သင်နေထိုင်ရာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို ပိုကျယ်ဝန်းစေဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်များ။
Home/Entertainment/K-pop ကြယ်ပွင့် Jaejoong တစ်ယောက် COVID – 19 ရောဂါခံစားနေရပြီလား ? ? ?
K-pop ကြယ်ပွင့် Jaejoong တစ်ယောက် COVID – 19 ရောဂါခံစားနေရပြီလား ? ? ?
So Shwe April 2, 2020	Entertainment Leaveacomment
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ K-Pop ကြယ်ပွင့် Kim Jae Joong ဟာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်ပူပန်အောင် စနောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဧပြီ၁ရက်နေ့က April Fool Day မို့လို့ပါ။
Kim Jae Joong ကို ချစ်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ April Fool Day ဆိုတာကို သတိမထားမိဘဲ JaeJoong အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်ပူပန်သွားရအောင် JaeJoong က ဘယ်လိုမျိုးစနောက်လိုက်လဲ?
အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19 ကို JaeJoong က ခံစားနေရတာကြောင့် ဆေးရုံရောက်နေတယ်လို့ သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ထားပါတယ်။ JaeJoong က တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာက သတိပေးထားတာတောင်မှ ပေါ့ပျက်ပျက်နေခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလိုမျိုးခံစားနေရတာဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ JaeJoong ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ JaeJoong အတွက် အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြရပါတယ်။
အချိန်ခဏကြာတော့ JaeJoong က သူဟာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ရှိနေပြီး ခုနကတင်ခဲ့တဲ့ Covid-19 ကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရတယ်ဆိုတာဟာလည်း စနောက်ခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုးစနောက်လိုက်တာကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်စေလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် JaeJoong ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ JaeJoong ရဲ့ စနောက်ခြင်းက သူတို့တွေရဲ့ ရင်ကိုဗလောင်ဆူစေသွားတာမို့ မကျေမချမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ JaeJoong ကတော့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို စနောက်ရတာကို သဘောကျတတ်တဲ့သူဖြစ်တာမို့ အရင်နှစ် April Fool Day မှာလည်း လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲအကြောင်း ကြေငြာပြီး ပရိသတ်တွေကို စနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
K-pop ၾကယ္ပြင့္ Jaejoong တစ္ေယာက္ COVID – 19 ေရာဂါခံစားေနရၿပီလား ? ? ?
အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ K-Pop ၾကယ္ပြင့္ Kim Jae Joong ဟာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ေအာင္ စေနာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဧၿပီ၁ရက္ေန႔က April Fool Day မို႔လို႔ပါ။
Kim Jae Joong ကို ခ်စ္ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ April Fool Day ဆိုတာကို သတိမထားမိဘဲ JaeJoong အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ရပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြက စိုးရိမ္ပူပန္သြားရေအာင္ JaeJoong က ဘယ္လိုမ်ိဳးစေနာက္လိုက္လဲ?
အခုလက္ရွိ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ COVID-19 ကို JaeJoong က ခံစားေနရတာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုေရာက္ေနတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕အင္စတာဂရမ္အေကာင့္မွာ တင္ထားပါတယ္။ JaeJoong က ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာက သတိေပးထားတာေတာင္မွ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ေနခဲ့မိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလိုမ်ိဳးခံစားေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕အင္စတာဂရမ္အေကာင့္မွာ တင္ထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ JaeJoong ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ JaeJoong အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကရပါတယ္။
အခ်ိန္ခဏၾကာေတာ့ JaeJoong က သူဟာက်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ရွိေနၿပီး ခုနကတင္ခဲ့တဲ့ Covid-19 ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေနရတယ္ဆိုတာဟာလည္း စေနာက္ျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးစေနာက္လိုက္တာကလည္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ေစလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ JaeJoong ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ JaeJoong ရဲ႕ စေနာက္ျခင္းက သူတို႔ေတြရဲ႕ ရင္ကိုဗေလာင္ဆူေစသြားတာမို႔ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ JaeJoong ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပရိသတ္ေတြကို စေနာက္ရတာကို သေဘာက်တတ္တဲ့သူျဖစ္တာမို႔ အရင္ႏွစ္ April Fool Day မွာလည္း လက္ထပ္မဂၤလာပြဲအေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီး ပရိသတ္ေတြကို စေနာက္ခဲ့ပါေသးတယ္။
Source ~ Sky News
Previous COVID-19 ဝေဒနာရှင်တွေကို ဖုန်းတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Samsung
Next ????????????? ?????????????????????? ?????????? ????????????? (?) ???
ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်အတိုင်း မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်တစ်ကားမထွက်လာခင် ထိုဇာတ်ကားရဲ့Trailer ကို ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့ အစ၊ အလယ်၊ အဆုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး လူထုရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ …